को–को परे फिपा बर्ष खेलाडीमा ?
अन्तराष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिपा) ले यस वर्षका उत्कृष्ट १० फुटबल खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष घोषणा हुने वर्ष फुटबल खेलाडीको उपाधि रोनाल्डोलाई दिइएको छ । पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्ड विश्व फुटबलका हस्ती हुन् । त्यस्तै बेल्जियमका केभिन दि ब्रुनी र इडेन हाजार्ड, रुसका ह्यारी केन,
काठमाडौं । क्रिकेटर शक्ति गौचनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। गौचनले नेदरल्याण्डसँगको खेलबाट सन्यास लिने उपयुक्त समय भएको भन्दै सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। नेपालमै एउटा खेल खेलेर सन्यास लिने उनले बताए। लड्समा हुने खेलको लागि आयोजना गरिएको विदाई कार्यक्रममा शक्तिले यस्तो
विश्वकप फुटबलमा बेल्जिमय तेस्रो,गोल्टेन बुट इंग्ल्याण्डलाई
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा बेल्जियम विजयी भयो । रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग स्टेडियममा भएको तेस्रो स्थानको भिडन्तमा शनिबार राति इंगल्याण्ड २–० ले पराजित भयो । इंगल्याण्डले खेलको सुरुआतदेखि नै डिफेन्सिभ खेल्दै आयो । ६४ हजार भन्दा बढी दर्शकले प्रत्यक्ष हेरेको खेलमा चौथो
आयोजक रसिया क्वाटर फाइनलमा
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि आइतबार सम्पन्न रोमाञ्चक खेलमा स्पेनलाई हराउँदै आयोजक रसिया विजयी भएको छ । मस्कोस्थित लुज्निकी रंगशालामा आयोजित खेल निर्धारित ९० मिनेटमा १–१ गोल बराबरी र अतिरिक्त ३० मिनेटको समयमा कुनै गोल हुन नसकेपछि पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको खेलमा स्पेन
काठमाडौं । साविकको विश्वकप फुटबल विजेता जर्मनी समूह चरणबाटै चरणबाटै बाहिरिएपछि टिम र उसका फ्यानहरू निकै पीडामा देखिन्छन् । कोरियासंगको लज्जास्पद हारपछि जर्मनीका प्रशिक्षक योचिम लोउ निकै तनावमा परेका हुन् । अघिल्लो पटक विश्वकप जितेको देश समुह चरणबाटै बाहिरीनु आफैमा सुखद होइन त्यो माथि १२ वर्षदेखि
काठमाडौं । फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप फुटबल–२०१८ प्रतियोगिता बिहीबार (आज) राति ८.१५ मिनेटमा उद्घाटन हुँदैछ । रसियाको मस्कोस्थित लुज्निकी रंगशालामा २१ औं संस्करणको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विधिवत उद्घाटन हुनेछ। उद्घाटन लगत्तै रसिया र साउदी अरेबियाबीचको खेल सुरू हुनेछ। उद्घाटन समारोहमा रंगशालामा
विश्वकप फुटबल : हेर्नुहोस् नेपाली समयअनुसार खेल तालिका
काठमाडौँ । २०१८ को विश्वकप फुटबलमा ३२ देश तयारी अवस्थामा छन् । जेठ ३१ गते राति पौने ९ बजे हुने उद्घाटन खेल र असार ३१ गते फाइनल खेल हुनेछ । रसियाका विभिन्न ११ सहरका १२ रंगशालामा खेल हुनेछ । विश्वकप खेल्ने देशमा युरोपबाट रुस, बेल्जियम, जर्मनी, बेलायत, स्पेन, पोल्याण्ड, आइसल्याण्ड, सर्बिया, फ्रान्स, पोर्चुगल,
अलविदा फुटबलर मणि
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व खेलाडी मणि विक्रम शाहको आज पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरियो । पित्तथैली र कलेजोको समस्याबाट पीडित शाहलाई आइतबार साँझ नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । सोमबार साँझ निधन उनको भयो। शाहको निधनले नेपाली फुटबल क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । शाहको
क्रिकेटर सन्दीपको नाम लिँदै मोदीले भने– खेलमा पनि हाम्रो सम्बन्ध बलियो
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल पनि आईपीएलमा जोडिएको भन्दै नेपाल र भारतका जनता जनताबीचको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताए । मोदी दुईदिने नेपाल भ्रमणपछि शनिबार साँझ
‘म्याच फिक्सिङ’ हुन दिन्न : एन्फा अध्यक्ष शेर्पा
काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले म्याच फिक्सिङ रोक्न तत्काल कानून आवश्यक रहेको बताएका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अध्यक्ष शेर्पाले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले भने,‘म्याच फिक्सिङको अन्त्य गर्न तत्काल कानून
काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को अध्यक्षमा कर्माछिरिङ शेर्पा निर्वाचित भएका छन् । एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा आज भएको १६ औँ साधारणसभाबाट निर्वाचनमा शेर्पाले अर्का प्रत्यासी मणि कुँवरलाई ५१ मतले पराजित गर्दै निर्वाचित भएका छन् । शेर्पाले ६३ र कुँवरले १२ मत प्राप्त गरेका थिए । साधारणसभामा
रुपन्देही । लर्ड बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्य क्रिकेट रंगशाला बनाउने अभियान बोकेको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनको टोलीले रुपन्देहीको सैनामैनामा जग्गा अवलोकन गरेको छ । सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोधमा आएको टोलीले सैनामैना ७ लम्टरियामा रहेको ६५ बिगाह जमिनमा रंगशालाको सम्भाव्यताबारे मंगलबार
क्रिकेट रंगशाला बनाउने धुर्मुसको घोषणा,जग्गा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह
काठमाडौँ । भूकम्प पीडित र मुसहर वस्तीमा नमूना वस्ती निर्माण गरेर चर्चा बटुलेका कलाकार सिताराम कट्टेल धुर्मुसले फेरि अर्को खुसीको कुरा घोषणा गरेका छन् । नागरिक नायक धुर्मुसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउने घोषणा गरेका छन् । ४ वटा नमूना वस्ती निर्माण गरिसकेका धुर्मुसले फेसबुकमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय
आईपीएल मेरो लागि ऐतिहासिक अवसर : क्रिकेटर सन्दिप
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने आईपीएलमा आफ्नो सगभागीतालाई लिएर उत्साहित रहेको बताएका छन् । दिल्ली डेयरडेभिल्समा आवद्ध भएपछि पहिलो पटक सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन् । आईपीएल खेल्ने र नेपाली खेलाडीका रूपमा राम्रो प्रभाव छाड्ने लक्ष्य
रमेश दवाडी/नेपाली खेल क्षेत्रमा क्रिकेट सबैभन्दा प्रिय खेल बनेको छ । क्रिकेटले एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सफलता हासिल गरेर अघि बढिरहेको छ । युवा खेलाडी सन्दीप लामिछाने आईपिएलका लागि छनोट र एकदिवसीय मान्यता पाउनुले क्रिकेटमा उपलब्धिमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ । यु–१९ एसिया कप, यू–१९ विश्वकप,
अबको लक्ष्य ५० ओभरको विश्वकप : कप्तान खड्का
काठमाडौँ । जिम्बाबेमा आइसीसी विश्वकप छनोट खेल खेलेर स्वदेश फर्किएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अबको लक्ष्य ५० ओभरको विश्वकप खेल्नु रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । सुपर सिक्समा पुग्न असफल भएपनि पहिलो पटक एकदिवसीय मान्यता पाएर फर्किएको नेपाली टोलीलाई सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य
पपुवा न्यूगिनीमाथि नेपालको शानदार जित,एकदिवसीय मान्यता पाउने पक्का
काठमाडौँ । आईसीसी विश्वकप छनोट अन्तर्गत एकदिवसीय मान्यताका लागि पपुवा न्यूगिनीसँगको खेलमा नेपालले शानदार रूपमा जित हाँसिल गरेको छ । टस जितेर पहिले फिल्डिङ गरेको नेपालले पपुवा न्यूगिनीमाथि सहज जित दर्ता गरेको हो । नेपालका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान सस्तैमा समेटिए । दोस्रो चरणका ब्याट्सम्यान दीपेन्द्र
आस्थास्मृति भलिवल प्रतियोगिता वैशाख २ बाट
काठमाडौँ । आस्थास्मृति प्रतिष्ठानले ‘आस्थास्मृति भलिवल कप २०७५’ को आयोजना गर्ने भएको छ । नयाँ वर्षको अवसर पारेर प्रतिष्ठानले उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो । आस्थास्मृति कपका सल्लाहकार संयोजक आर विक्रमसिंह ओखेडाले बझाङको केदरस्यु गाउँपालिका–५ रत्नमाध्यामिक विद्यालय बगडि–पाउटामा
काठमाडौँ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गतको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले हङकङलाई ५ विकेटले पराजित गरेको छ । हङकङले दिएको १५४ रनको लक्ष्य नेपालले ५ विकेटको क्षतिमा ५५ बल बाँकी छँदै भेट्टाएको हो । नेपाललाई जिताउने क्रममा नटआउट रहेका रोहितकुमार पौडेलले सर्वाधिक ४८ रन बनाए । उनले ८६ बलको
स्पिन्जको महिला खेलाडी सम्मान
काठमाडौं । १०८ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा स्पिन्ज परफ्युम डियो क्याभिन कियरले नेपाली खेलकुद जगतमा विशेष योगदान पुर्याउने महिला खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच क्याभिन केयरले सम्मान गरेको हो । सम्मानित हुनेहरुमा मोटर स्पोर्टसकी मेरिना श्रेष्ठ, टेबल टेनिसकी
काठमाडौँ । पेरिस सेन्ट जर्मेनका स्ट्राइकर नेमारले रसियामा हुन लागेको विश्वकप फुटबल गुमाउन सक्ने जोखिम बढेको छ । गत आइतवार लिग वान अन्तरगत मार्सिल्लेविरुद्धको खेलका क्रममा कुर्कुचामा गहिरो चोट बोकेपछि नेमार यो सिजनभर मैदानबाट बाहिर रहने भएका हुन् । ब्राजिलका प्रमुख स्ट्राइकर नेमारको चोटग्रस्त
सन्दीपले क्रिस गेलको क्लबबाट खेल्ने
काठमाडौँ । नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले एक पछि अर्को सफलता हात पार्दै अगाडि बढेका छन् । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) खेल्ने पहिलो नेपाली बनेका क्रिकेटर लामिछानेलाई अर्को खुसी मिलेको छ । उनले क्यारेवियन प्रियियर लिग खेल्ने भएका छन् । उनलाई सीपीएलको सेन्ट किट्स एण्ड नभिस पेट्रियर्सले ५ हजार
जिम्बावेका राष्ट्रपति माङगाग्वाद्वारा आईसीसी विश्वकप छनोटको ट्रफी सार्वजनिक
काठमाडौं । आगामी २० गते सुरु हुने आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप छनोट क्रिकेटको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ । हरारेमा जिम्बावेका राष्ट्रपति इर्मसन माङगाग्वाले ट्रफि सार्वजनिक गरेका हुन् । ट्रफी सार्वजनिक समारोहमा प्रतियोगीतामा सहभागी हुने १० राष्ट्रका कप्तान पनि सहभागी थिए । ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रमपछि
काठमाडौं । जिम्बावेमा आयोजना हुने विश्वकप क्रिकेट छनोट खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले पारस खड्काको कप्तानीमा चार वैकल्पिक खेलाडीसहित १९ सदस्यीय खेलाडीको घोषणा गरेको हो । टोलीमा को–को छन् ? घोषित टोलीमा कप्तान खड्कासहित उपकप्तान
आइपीएल खेल्ने सन्दिप पहिलो नेपाली
काठमाडौं – नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दिप लामिछानेलाई दिल्लीडेयर डेभिल्सले अनुबन्धीत गरेको छ। भारतको बेङलोरमा जारी आइपिएलको अक्सनमा सन्दिपलाई दिल्लीले २० लाखमा किनेको हो । आइपिएल क्लब क्रिकेटको सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता हो। सन्दिप आइपिएलमा पर्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर हुन् । आईपीएलको
बाल उद्धार कलेजमा खेलकूद प्रतियोगिता
सुमन लामा/काठमाडौं २६, पुस । कपनस्थित बाल उद्धार कलेजले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी का लागि खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । जाडो विदाको अवसर पारेर क्याम्पसले खेलकूद कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । विगत बर्षमा झैं यसवर्ष पनि खेलकूद कार्यक्रम आयोजना गरिएको सहायक क्याम्पस प्रमुख डिपी आचार्यले जानकारी